I-loft ehamba phambili enobhavu wamanzi ashisayo wasendlini - I-Airbnb
I-loft ehamba phambili enobhavu wamanzi ashisayo wasendlini
La Bresse, Grand Est, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sandrine
U-Sandrine Ungumbungazi ovelele
indawo ekahle etholakala enhliziyweni ye-cross-country kanye nemithambeka ye-alpine ski kanye nokuhamba okuningi kokuqwala izintaba nokuhamba ngebhayisikili.
uyimizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha, imizuzu emi-5 ukusuka emachibini aseLongemer nangemuva, imizuzu eyi-15 ukusuka eGerardmer.
I-Loft enamagumbi okuhlala ekhishini ahlome ngokuphelele (umshini wokuwasha izitsha, i-toaster, i-Nespresso, iketela, ihhavini, i-microwave, ifriji, umshini wokuwasha, isomisi, umshini we-raclette, i-fondue kanye nomenzi we-crepe)
I-Duplex king size water bed, i-TV, indlu yokugezela ehlukene kanye nendlu yangasese.
Isitezi esihle kakhulu esineziphephetha-moya esineziphephetha-moya esiphansi esibheke eningizimu esinethala nengadi, etholakala ngaphansi kwe-cross-country kanye nemithambeka ye-alpine ski kanye nezindawo eziningi zokusuka izintaba nokuhamba ngamabhayisikili.
Ziphethe amakhabethe yokugcina, ikamelo elikhulu eziphilayo ne ekhishini zinakho (Umshini wokuwasha izitsha, into yokucocobalisa, futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo abenzi ikhofi, iketela, itiye infuser, microwave, kuhhavini, efrijini nge efrijini, umshini wokuwasha, umshini wokomisa izingubo.)
Usofa onethezekile nomabonakude wesikrini esikhulu esingu-55 inch.
Isitezi esiphezulu umbhede wamanzi ashisiwe usayizi wendlovukazi ukuze uthole ukunethezeka okuphelele (kwezokwelapha)
ikhabethe lokugcina elingu-32 inch flat screen TV
BZ umbhede owengeziwe 140 by 190
indlu yokugezela eneshawa, isomisi sethawula, isomisi sezinwele.
Ngaphandle kunetafula elinezihlalo ezi-4 nama-relaxer amabili.
Indawo yokupaka evaliwe
Indawo yokushushuluza eqhweni – Ku-ski run
4.80 · 79 okushiwo abanye
USandrine Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- La Bresse namaphethelo